Check Out the Event – Gold Channel Movies
Aug. 14, 2021 MBCVikiwavve
Episode2Aug. 21, 2021
ဒီတစ်ခေါက် GCပရိသတ်ကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့ လူငယ်ဆန်ပြီး အချစ်အကြောင်းကို တစ်မူထူးပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့ melodramaကားကောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေအနေနဲ့ကတော့ ဘတ်ဒိုဂယွန်အဖြစ် Mouseကားလေးထဲက ယူတို့တသသဖြစ်နေခဲ့ရတဲ့ စိတ္တဇလူသတ်သမားလို့ အထင်မှားခဲ့တဲ့ မင်းသားချော Kwon Hwa Woonက အဓိကဇာတ်ဆောင်အနေနဲ့ တင်ဆက်ထားပါတယ်။ မင်းသားချော An Woo Yeonကတော့ စာရေးဆရာ ဆောဂျီဂန်အဖြစ် ပါဝင်ထားပြီး မင်းသမီးကတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Apinkအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လူသိများကြတဲ့ Ming Ahက အဓိကဇာတ်ဆောင် ဟာဆုန်းအီအနေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဘတ်ဒိုဂယွန်က တီးဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင် အဆိုတော်ဖြစ်ပြီး ဟာဆုန်းအီကတော့ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဆောဂျီဂန်ကတော့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စုံတွဲခရီးစဉ်မှာဂိုက်အဖြစ်လိုက်ပါပေးတဲ့သူပါ။
လမ်းခွဲပြီးသား ချစ်သူနှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့ ဟာဆုန်းအီနဲ့ ဘတ်ဒိုဂယွန်တို့နှစ်ယောက်ဟာ Eventတစ်ခုမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ စုံတွဲခရီးစဉ်အတွက် စုံတွဲအနေနဲ့ တဖန်ပြန်လည်ဟန်ဆောင်ပြီး လိုက်ပါခဲ့ရင်းကနေ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ဘာတွေဖြစ်ကြမလဲ။ လမ်းခွဲထားတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေကနေ အရင်အတိတ်နေ့ရက်တွေဆီပြန်သွားပြီး အချစ်တစ်ခု ပြန်လည်ပေါက်ဖွားလာနိုင်မလား…ဒါမှမဟုတ် တတိယလူဝင်လာခဲ့တဲ့အခါမှာကော သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပေါ်ပေါက်လာမလား… ဆိုတာတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုခံစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်တစ်ပိုင်းပဲ ထွက်မယ့်ဇာတ်ကားလေးကို အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ GC Teamနဲ့အတူ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှူလိုက်ကြရအောင်ပါ။
Translated and Review by Hnin Aye Nyein, Faith & Chu
Original title 이벤트를 확인하세요
First air date Aug. 14, 2021
RaphaelSeptember 4, 2021Reply
You really make it seem so easy with your presentation however I in finding this topic to be actually something which I think I would by no means
Feel free to surf to my web blog; asmr my
TedSeptember 3, 2021Reply
Here is my web blog :: asmr an, bitly.com,
OmaSeptember 1, 2021Reply
Also visit my blog: quest bars my (http://t.co/BnmehOIl8g)
GeorgianaAugust 28, 2021Reply
It was really informative. web hosting your website is very
Swamp Thing (2019) ????????????????